नयाँ शक्तिकी रोल नम्बर २४० :: Press Chautari ::
सोमवार, चैत्र १७ गते, २०७६
नयाँ शक्तिकी रोल नम्बर २४०
- डा. प्रदीप भट्टराई
नेपाली राजनीतिक सत्ताका बिग फोरमध्ये दुई महिला छन्, राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती । यसो हुँदा धेरैलाई लाग्दो हो, नेपाली समाजमा राजनीति गर्ने महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आनका तान फरक पर्‍यो । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन, अझै पनि नेपाली समाज नेपाली महिला राजनीतिज्ञप्रति त्यति धेरै उदार हुन सकेको छैन । यिनै दुई ठूला नामलाई पनि उनीहरुको कामसँग भन्दा श्रीमान्को नामसँग जोडेर त्यसैको स्याटलाइटबाट हेर्ने गरिन्छ ।
कुरा यी बिग टू को मात्र हैन, २००४ सालमा नेपाल महिला संघ खोलेर क्रान्तिको विगुल फुक्ने मंगलादेवी सिंहको पनि हो, २०१७ सालको पञ्चायती कुदेताविरुद्ध आवाज उठाउने शैलाजा आचार्यको पनि हो । सिंहलाई चुनावमा हराउने नेपाली समाजले आचार्यको पनि उस्तै हविगत बनायो । उनीहरुमध्ये सिंहलाई गणेशमान सिंहकी श्रीमती र आचार्यलाई वीपी कोइरालाकी भान्जी नै बढी देख्यो । यस्तै अवस्था वामनेतृ साहना प्रधानको पनि रह्यो । उनलाई पनि समाजले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अभियन्ता पुष्पलालकी श्रीमतीकै रुपमा बढी बुझ्यो । अझ सुजाता कोइराला र हिसिला यमीप्रति त नेपाली समाज उदार हैन, पूर्वाग्रही नै छ भने पनि हुन्छ । अरुलाईभन्दा पनि बढी उनीहरूलाई लिगेसीसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ । टाढा जानै पर्दैन, वीपी पुत्र डा. सशांक कोइरालालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने नेपाली समाज जीपी पुत्री सुजाता कोइरालाको चाहिँ राजनीतिमा योगदानको हिसाब किताब माग्छ । आखिर दुबै जनाको हैसियत उही हो राजनीतिमा । फरक केही छ भने एकजना पुरूष, अर्काे महिला ।
प्रसंग हिसिला यमीको हो । उनलाई पनि नेपाली राजनीतिकी एउटा त्यस्तै पात्रका रुपमा लिइन्छ । २००७ सालको क्रान्तिकारी परिवार धर्मरत्न यमी (जो त्यतिबेलै मन्त्री भएका थिए) की छोरी हुन् हिसिला । आजभन्दा ४० वर्षअघि इञ्जिनियरिङ गरेर इञ्जिनियरलाई पढाउन थालेकी त्यो कालखण्डकी महिला हुन् उनी । घरमै कम्युनष्टि स्कूलिङ भएकी उनले राजनीति घरमै सुरु गरिन् भन्दा पनि हुन्छ ।
नेपाली वाम राजनीतिमा उको इतिहास पनि छ, योगदान पनि छ । तर, ढंग मिलाएर बोल्न नजान्ने र प्रोटोकलमा खासै ध्यान नदिने हिसिलाको छवि एक भ्रष्ट महिलाका रूपमा नेपाली समाजमा प्रस्तुत छ । उनी साँच्चै त्यस्तै हुन् कि हैनन् त्यसको पछाडि खोजबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कसैलाई फुर्सद छैन । तर, पार्टी मिडिया र त्यसका भरमा धारणा बनाउनेहरूले हिसिलालाई दक्षिण एसियाकै सर्बाधिक भ्रष्ट महिलाको पदवी दिएर आफू चोखो हुने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । यसोभन्दा धेरैलाई यो हिसिलाको पक्षपोषण पनि लाग्न सक्छ । तर, माफ गर्नुहोला, यो हिसिलाको पक्षपोषण हैन । कसैमाथि आरोप लगाउन केही आधार त चाहिन्छ होला नि भन्ने मात्र हो । त्यसो भन्नका लागि न कसैको पक्षपोषण गर्नुपर्छ, न धुवाधार गाली नै । यद्यपि, अहिलेसम्म पनि उनीमाथि आरोप लगाउनेहरूको कमी छैन । भलै, त्यसका लागि न राज्यसँग सबुत छ न त्यस्तो आरोप लगाउनेसँग नै ।
डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा राजनीतिमा अगाडिकी हुन् हिसिला । तर, उनलाई बाबुरामकी श्रीमती बढी र राजनीतिज्ञ कम देख्छ नेपाली समाज । यो समाजमा यसो भन्ने पनि धेरै छन्, डाक्टर साहेब त राम्रा हुन् तर हिसिलाले नै सखाप पारिन् उनलाई । यस्तै कुरा गणेशमानसँग जोडेर मंगलादेवीका बारेमा पनि भन्ने गरिन्थ्यो, पुष्पलालसँग जोडेर सहाना प्रधानका बारेमा पनि भनिन्थ्यो । तर, हाम्रो समाजले हरेक कुरालाई नौ दिनमा नौलो मान्छ र २० दिनमा बिर्सन्छ । मंगला हुन् या साहना, दुबैलाई एउटै सिक्काका दुई पाटा बनाइएकै हो । त्यसैको पछिल्लो घानमा मात्र परेकी हुन् हिसिला । प्रजातन्त्रको पाँचौ अंग हो समावेशिता । नेपालले पनि यसलाई अंगिकार गर्नुको विकल्प छैन ।
यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा पहिला त हामी राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्छौं र राम्रा मान्छे जानलाई नै निरूत्साहित गर्छाै । जो गएका हुन्, त्यहीबाट छान्ने त हो नि । यसरी छान्दा हिसिला नेपाली राजनीतिमा छोइछिटोमा पर्छिन र पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हिसिलाका बारेमा नबुझी भन्दा त जे भने पनि हुन्छ । तर, बुझेर भन्दा उनी सबै कोण र सापेक्षतामा छानिदा नेपाली महिला राजनीतिज्ञमा सूचीको पाँचभन्दा तल पर्छिन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, हामी आआफ्नो सोच र कोणको चस्माले हेर्छाै र उनमा खराबी मात्र देख्न सक्छौं । खराब उनको अनुहारमा जति छ, त्यो भन्दा बढी हाम्रो चस्माको सिसामा छ । यसको अर्थ यो पनि हैन कि उनी दूधले धोएकी बिरालो हुन् । उनमा पनि कमी कमजोरी छन् । तर, ती सबै सापेक्षताको तराजुमा नापिनु पर्छ । यसो भन्नका लागि चाहिँ कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।
डा. बाबुरामको नयाँ शक्तिमा पर्न हिसिलाले तेस्रो सूची पर्खनु पर्‍यो । नपर्दा पनि मानिसले भने, अझै हिसिला परिनन् । पर्दा पनि मान्छेहरूले भने, आखिर परिछाडिन् । नेपाली समाज यस्तो समाज हो जहाँ दायाँबाट हिड्यो भने किन दाँयाबाट हिडिस् भनेर सोधिन्छ । दायाँबाट हिड्नु नहुने रहेछ भनेर बाँयाबाट हिड्यो भने पनि किन बाँयाबाट हिडिस् भनेर प्रश्न गरिन्छ । हिसिलाका बारेमा पनि यो समाज फरक छैन, उस्तै हो । मेरो विचारमा हिसिला नयाँ शक्तिमा २४०औं नम्बरमा पर्नुपर्ने ब्यक्ति हैनन् । उनीभन्दा अगाडिको रोलक्रममा जे जस्ता नाम र अनुहार छन् तिनीहरूको सापेक्षमा पनि हिसिला रोल नम्बर २४० हुने हैनन् । म आमसञ्चारको विद्यार्थी, हरेक कुरालाई ट्रेजरी बेञ्चबाट हैन, अपोजिसन बेञ्चबाट हेर्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु । यसरी हेर्दा हिसिला यमीलाई बाबुरामकी श्रीमतीका रूपमा मात्र हेर्ने कुराको पक्षपोषण सम्भव हुँदैन । उनको आफ्नै राजनीतिक इतिहास, संघर्ष र व्यक्तित्व छ, यो घाम जत्तिकै सत्य हो ।
हो, उनको विचारसँग, तौरतरिकासँग, आनिबानीसँग असहमत हुन सकिएला । तर, त्यसकै आधारमा हिसिलामाथि बरो प्रसेप्सन (मिडिया या अरूले थोपरेको उधारो धारणा) को भारी बोकेर आफ्नो धारणा बनाउनु न्यायसंगत होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मलाई थाहा छ, यसो भन्दा धेरैलाई चित्त बुझ्दैन । किनकि, बरो प्रसेप्सनका आधारमा उनीहरूको माइन्डसेट बनिसकेको छ । माइन्डसेटबाट नल पोइन्टमा आउन सबैभन्दा गाह्रो पर्ने जाति हो नेपाली । न म त्यसमा अपवाद छु, न कसैले भन्यो भने पनि सजिलै पत्याउँछु । तर, संसार एकापट्टि र म एक्लै अर्काेपट्टि भए पनि म भनिरहनेछु , हिसिला नयाँ शक्तिमा रोल नम्बर २४० हुने मान्छे हैनन् । माफ गर्नुहोला यसो भन्नु परेकोमा । अपवादलाई छोडेर म हरेक कुरा या घटनालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्ने कोसिस गर्छु । हरेक कुरालाई सापेक्षतामा हेर्ने इमान्दार प्रयत्न गर्छु । अनि कसैका बारेमा केही बोल्नुपर्दा मसँग एउटै फित्ता हुन्छ, अब्जेक्टिविटी । हिसिलाका बारेमा पनि मेरो कुरा उही हो । उनलाई मात्र मैले फरक फित्ताले नाप्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । फेरि पनि हामीले भएकैबाट छान्ने हो ।
हामीसँग भएका महिला राजनीतिज्ञमा हिसिला पनि एक हुन् । होला, हिसिलाभन्दा करिश्मा लोकप्रिय होलिन् । तर, राजनीतिमा करिश्मा र हिसिलाको तौल एउटै हुन सक्दैन । कसैलाई लाग्न सक्छ तर यथार्थमा रारातारात कोही पनि हिसिला बन्न सक्दैन । आगे यहाँहरूकै मर्जी ।
विहिवार, २०७२ माघ २७ गते ०२:१६ / Thursday, Feb 11, 2016 2:16 am
अरु समाचारहरु :: नेपाल सन्दर्भ : डा. प्रदीप भट्टराई
1. नयाँ शक्तिकी रोल नम्बर २४०
2. ‘सफ्ट-सेल’ नेपालीका ‘हार्ड-सेल’ कुरा
3. नाइन इलेवेन : हामी कहिल्यै भुल्दैनौं
4. टीपीएस : मिल्ला त बिछोडिएको नेपाली गला ?
5. गुडबाइ काडमाण्डू
6. एनआरएन एनसीसी चुनाव :
7. बन्ला त नेपाल करोडौंको स्वर्ग ?
8. बन्ला त नेपाल करोडौंको स्वर्ग ?
9. गुडबाइ काडमाण्डू
10. भो अति भो, कति दोष दिनु सतीलाई ?
11. तीतो सत्य, भाइरल र मोदी म्युट
12. सिन्डिकेट संसार
13. मोदीको मोफसल भ्रमण
14. कस्मेटिक क्याटमाण्डू
15. कति गर्छौ हँ, हाम्रो सपनाको हत्या ?
16. अति भो, कति बन्नु
17. मुखमा तीन 'स'- बगलीमा-'म'
18. कहाँ छ ज्ञानेन्द्रमा बाबुपन ?
19. यो कस्तो न्याय ?
20. तेस्रो अंगको आंगनमा लैलै, चौथो अंगको रोपाइँ
21. डटकम भाइरल
22. पत्रकारितामा पुरस्कार-जंकिट कि टिप्स ?
23. अजव-गजवको नेपाल
24. मोदी सपथग्रहण-एमालेका मन्त्री, कांग्रेसको जन्ती
25. राजेश हमालको विवाह-एउटा स्थायी प्रश्नको विदाइ
Results 43: You are at page 1 of 2